Xaflada xisaab xirka Walaal Afuri oo ka dhacday Magaalada London
Xaflad aad u balaaran oo ay kasoo qeyb galeen qaar ka mid ah Jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK, isla markaana lagu soo bandhigay xisaab xirka Barnaamijkii Bisha Barakeysan ee Ramadaan lagu caawinaayay walaalaha Soomaaliyeed ee loogu Magac daray Walaal Afuri, ayaa lagu qabtay Magaalada London ee cariga dalka Britian.
Xafladaan oo ay soo abaabuleen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Bishii Ramadaan isku mashquuliyay sidii ay u caawin lahaayeen walaalhooda danyarta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka soomaaliya iyo dalalka dariska la ah Soomaaliya, ayaa waxaa lagu soo bandhigay Qarashka laga aruuriyay walaalaha soomaaliyeed ee qurba joogta, qaabka loo maareeyay iyo inta Qoys ee lagu quudiyay.
$21,580, taasi oo qaab sharciyeesan loo marsiiyay Xawaaladaha, iyadoona la gaarsiiyay 300-qoys, oo ku kala nool 60-goobood oo isugu jira, Magaalo, Tuulo iyo Degmo ka wada tirsan dhamaan 18-Gobol ee dalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale qoysaska wax la gaarsiiyay ay ku jireen dad iyagu kunool, Jabuiti, Nairobi, Gaarisa, Ticis Yemen, Dhadhaab, Kakuma, Ifo dhagaxley, Jigjiga oo dhamaantood ka wada tirsan wadamada Kenya, Yemen, Jabuuti, iyo Eithopia.
Lacagahaan ayaa ah kuwo laga soo aruuriyay Soomaalida kunool wadamada, UK, Sweden, Denmark, Holland, USA, Canada iyo UAE, iyadoona Xarunta laga Maamulaayay ay aheyd Magaalada London, oo markii hore laga abaabulay fikirkaan lagu caawinaayay Walaalaha Soomaaliyeed inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan taasi oo loo bixiyay Walaal Afuri.
Soomaalida ku dhaqan Qurbaha ayaa si weyn u Amaanay dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu keenay fikirkaan lagu caawinayay Walaalaha Soomaaliyeed ee danyarta ah, iyagoona sidoo kale ku baaqay in lasii wado Barnaamijkaan, isla markaana sanadaha soo socda ee Bilaha Barakeysan Ramadaan Abaabulka sida uu sanadkaan ahaa laga sii xoojiyo, waxna la taro walaalaha Soomaaliyeed.
Barnaamijkaan Walaal Afuri ee Bisha Ramadaan lagu quudiyay 300-qoys ayaa ahaa midkii ugu horeeyay ee nuuciisa oo kale ah ay soo abaabulaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jiray rag iyo haween, iyadoona sidoo kale uu ahaa mid si cad bulshada loogu soo bandhigayay qarashaadka ay bixiyeen, halka la marsiiyay, qaabka loo maareeyay iyo goobaha la gaarsiiyay intaba, iyadoo la adeegsanayay baraha bulshada ee ku kulmaan, iyadoo horey aan talaabada nuucaas oo kale ah loogu baran dadka iyagu ka shaqeeya dhinaca deeqaha.